ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး စူပါကား စုဆောင်းမှု - Optima Werkz Yangon
ဘာရိန်းမြို့မှာရှိတဲ့ ကားဝါသနာအိုး တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ စုဆောင်းထားတဲ့ ဒီကမ္ဘာပေါ်က ဈေးအကြီးဆုံး ကားစုဆောင်းမှု Collection တစ်ခုကို အင်တာနက်ကနေ သွားလည်ရအောင်။
ဒီထဲကိုရောက်သွားရင် လျှို့ဝှက်စပိုင်တစ်ယောက်လို ခံစားသွားရမှာပဲ။ Top Gear အဖွဲ့က အယ်ဒီတာ တစ်ယောက်ဟာ ဘာရိန်းမြို့က စူပါကားတွေချည်းပဲ စုစည်းထားတဲ့ ကားဂိုထောင်ထဲကို ဝင်ခွင့်ရဖို့ အများကြီး ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလူဟာ အင်စတာဂရမ်မှာ @the_collection1 ဆိုတဲ့ ပုံတုံးတုံးနာမည်ကိုသာ အသုံးပြုပြီး သူ့ကိုယ်သူ ထုတ်ဖော်မပြပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဂိုထောင်ကြီးထဲမှာတော့ စုစုပေါင်း စတာလင်ပေါင် သန်း ၁၀၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဇိမ်ခံကားတွေ ရပ်ထားတာပါ။
ဖိတ်ခေါ်ခံရသူ ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ကားစုဆောင်းသူတွေရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ ဈေးအကြီးဆုံး စာရင်းဝင် ဇိမ်ခံကားတွေကို အစီအရီ ထိုးရပ်ထားတာ တွေ့လိုက်ရပြီး ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ တပြိုင်တည်း မနာလိုတောင် ဖြစ်သွားရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ သူမှတ်တမ်းတင်လာတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တွေ့ရခဲတဲ့ ကားပေါင်းများစွာကို တစ်နေရာတည်း လမ်းတစ်ပတ်လျှောက်ကြည့်နိုင်တဲ့ စူပါကား Collection ကြီးကို ခံစားကြည့်ရအောင်။
၁. McLaren F1
ကိုယ်ထည်နံပါတ် ၀၀၆ ၊ မူရင်းအရောင်က ငွေရောင်ပါ။ သူ့ရဲ့ အင်ဂျင်ကို Flouro Orange ချယ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်စီးတည်းသောကား။
၂. Porsche 918 Spyder
LaFerrari နဲ့ McLaren P1 ရှိပြီး Porsche 918 Spyder တစ်စီးမှ မရှိဘူးဆိုတာ မဖြစ်သင့်ဘူး မဟုတ်လား။
၃. McLaren P1
McLaren F1 လိုပဲ ဒီကောင်ဟာလည်း ထုတ်လုပ်မှုမှာ နံပါတ်ခြောက် ဖြစ်ပါတယ်။
၄. McLaren Senna
နောက်ဆုံးရောက်ရှိထားတဲ့ ကားတွေထဲက တစ်စီး၊ ကာဘွန်ဖိုင်ဘာကိုယ်ထည်က ထင်ထားတာထက် လှပတယ်။ မကြာခင် ထွက်လာမယ့် Speedtail ကိုလည်း ဒီလူက မှာထားပြီးပါပြီတဲ့။
၅. 911 GT1 Straßenversion
သရဖူပေါ်က ကျောက်မျက်ရတနာ တစ်ခုပါပဲ။ ဒီကားတွေထဲမှာ 993 စတိုင် Headlight ပါတဲ့ ကားနှစ်စီးပဲ ရှိပြီး ဒီမှာ တစ်စီးကို မြင်နေရပါပြီ။ ကျန်တဲ့ကားတွေအကုန် 996 စတိုင်တွေ ဖြစ်တယ်။ အခြေခံမြင်းကောင်ရေ ၅၃၆ ကောင်အား၊ တစ်နာရီ ၆၂ မိုင်ကို ၃.၉ စက္ကန့်နဲ့ ရောက်နိုင်တယ်။ Top Speed က တစ်နာရီ ၁၉၁ မိုင်နှုန်း။
၆. Mercedes AMG CLK GTR
၆.၉ လီတာ V12 အင်ဂျင်၊ အခြေခံမြင်းကောင်ရေ ၆၀၄ ကောင်အားနဲ့ အမိုက်ဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါ။
၇. Bugatti Chiron
ဒါဟာ Spec အမြင့်ဆုံး ဆင်ထားတဲ့ Bugatti Chiron လို့ထင်ရပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းတာ တော်လွန်းလို့ ကားရဲ့ ရနံ့ကတောင် အသစ်စက်စက်အတိုင်း ရနေသေးတယ်လို့ ဆိုတယ်။
၈. Bugatti Veyron
Standard ဖြစ်တဲ့ မြင်းကောင် ၉၈၇ အား တံခါးနှစ်ပေါက် Coupe ကားပါ။ ပိုလန်းတဲ့ Hermes Edition နဲ့။
၆.၃ လီတာ V12 အင်ဂျင်နဲ့ Hybrid Assistance ပါဝင်တယ်။ အခြေခံမြင်းကောင်ရေ ၉၅၀ အားရှိပြီး ငါးနှစ်ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် ကားဝါသနာအိုးတွေကို သွားရေယိုစေတုန်းပဲ။
၁၀. Ferrari F50 (အလယ်မှာ)
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ပုံစံက ခေတ်မှီနေတုန်းပဲ။
၁၁. Toyota 2000GT
ဂျပန်ကားချစ်သူတွေ အတွက်တော့ ရှားပါးတဲ့ စုစည်းမှုပါပဲ။ ယာမာဟာကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်း တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ အရမ်းရှားပြီး ဈေးအရမ်းမြင့်တဲ့ Collection ဖြစ်နေပါပြီ။
၁၂. Saleen S7
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Saleen ရဲ့ Legacy ကို စတင်ပေးခဲ့သူတစ်ဦး။ Bruce Almighty ရုပ်ရှင်မှာ ငွေရောင်မော်ဒယ်တစ်စင်း ပါခဲ့ဖူးပါတယ်။
၁၃. Hennessey Venom
သူ့ရဲ့ Top Speed ဖြစ်တဲ့ တစ်နာရီမိုင် ၂၇၀ နှုန်းဖြင့် အပြည့်မောင်းနှင်တာကို ဘယ်လို ကံဇာတာနဲ့မှ တွေ့မြင်ခွင့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁၄. Koenigsegg Agera RS
လက်ရှိမှာ Top Speed 277 mph နဲ့ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး စက်ရုံထုတ် လူစီးကား ဖြစ်ပါတယ်။
၁၅. Lamborghini Reventon
ကွန်မန်ဒို အစိမ်းရောင် ထိုင်ခုံတွေနဲ့ ကားဟာ အစီးရေ ၂၀ ပဲ ထုတ်လုပ်တဲ့ထဲက တစ်စီးပါ။
@the_collection1 ရဲ့ ဂိုထောင်ထဲမှာတော့ Porsche, McLaren, Mercedes တို့က ထုတ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်ကားတွေ အများစုကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကား Collection ကို အားကျချင်ရင်တော့ အင်စတာအကောင့်မှာ သွားရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဘာရိနျးမွို့မှာရှိတဲ့ ကားဝါသနာအိုး တဈယောကျရဲ့ စိတျသှားတိုငျးကိုယျပါ စုဆောငျးထားတဲ့ ဒီကမ်ဘာပျေါက ဈေးအကွီးဆုံး ကားစုဆောငျးမှု Collection တဈခုကို အငျတာနကျကနေ သှားလညျရအောငျ။
ဒီထဲကိုရောကျသှားရငျ လြှို့ဝှကျစပိုငျတဈယောကျလို ခံစားသှားရမှာပဲ။ Top Gear အဖှဲ့က အယျဒီတာ တဈယောကျဟာ ဘာရိနျးမွို့က စူပါကားတှခေညျြးပဲ စုစညျးထားတဲ့ ကားဂိုထောငျထဲကို ဝငျခှငျ့ရဖို့ အမြားကွီး ကွိုးစားခဲ့ရပါတယျ။ ဒီလူဟာ အငျစတာဂရမျမှာ @the_collection1 ဆိုတဲ့ ပုံတုံးတုံးနာမညျကိုသာ အသုံးပွုပွီး သူ့ကိုယျသူ ထုတျဖျောမပွပမေယျ့ သူ့ရဲ့ ဂိုထောငျကွီးထဲမှာတော့ စုစုပေါငျး စတာလငျပေါငျ သနျး ၁၀၀ ကြျော တနျဖိုးရှိတဲ့ ဇိမျခံကားတှေ ရပျထားတာပါ။
ဖိတျချေါခံရသူ ရောကျသှားတဲ့အခြိနျမှာတော့ ကားစုဆောငျးသူတှရေဲ့ အိပျမကျဖွဈတဲ့ ဈေးအကွီးဆုံး စာရငျးဝငျ ဇိမျခံကားတှကေို အစီအရီ ထိုးရပျထားတာ တှလေို့ကျရပွီး ပြျောရှငျမှုနဲ့ တပွိုငျတညျး မနာလိုတောငျ ဖွဈသှားရတယျလို့ ဆိုတယျ။ သူမှတျတမျးတငျလာတဲ့ ကမ်ဘာပျေါမှာ တှရေ့ခဲတဲ့ ကားပေါငျးမြားစှာကို တဈနရောတညျး လမျးတဈပတျလြှောကျကွညျ့နိုငျတဲ့ စူပါကား Collection ကွီးကို ခံစားကွညျ့ရအောငျ။
ကိုယျထညျနံပါတျ ၀၀၆ ၊ မူရငျးအရောငျက ငှရေောငျပါ။ သူ့ရဲ့ အငျဂငျြကို Flouro Orange ခယျြထားတဲ့ ကမ်ဘာပျေါမှာ တဈစီးတညျးသောကား။
LaFerrari နဲ့ McLaren P1 ရှိပွီး Porsche 918 Spyder တဈစီးမှ မရှိဘူးဆိုတာ မဖွဈသငျ့ဘူး မဟုတျလား။
McLaren F1 လိုပဲ ဒီကောငျဟာလညျး ထုတျလုပျမှုမှာ နံပါတျခွောကျ ဖွဈပါတယျ။
နောကျဆုံးရောကျရှိထားတဲ့ ကားတှထေဲက တဈစီး၊ ကာဘှနျဖိုငျဘာကိုယျထညျက ထငျထားတာထကျ လှပတယျ။ မကွာခငျ ထှကျလာမယျ့ Speedtail ကိုလညျး ဒီလူက မှာထားပွီးပါပွီတဲ့။
သရဖူပျေါက ကြောကျမကျြရတနာ တဈခုပါပဲ။ ဒီကားတှထေဲမှာ 993 စတိုငျ Headlight ပါတဲ့ ကားနှဈစီးပဲ ရှိပွီး ဒီမှာ တဈစီးကို မွငျနရေပါပွီ။ ကနျြတဲ့ကားတှအေကုနျ 996 စတိုငျတှေ ဖွဈတယျ။ အခွခေံမွငျးကောငျရေ ၅၃၆ ကောငျအား၊ တဈနာရီ ၆၂ မိုငျကို ၃.၉ စက်ကနျ့နဲ့ ရောကျနိုငျတယျ။ Top Speed က တဈနာရီ ၁၉၁ မိုငျနှုနျး။
၆.၉ လီတာ V12 အငျဂငျြ၊ အခွခေံမွငျးကောငျရေ ၆၀၄ ကောငျအားနဲ့ အမိုကျဆုံးတှထေဲက တဈခုပါ။
ဒါဟာ Spec အမွငျ့ဆုံး ဆငျထားတဲ့ Bugatti Chiron လို့ထငျရပါတယျ။ ထိနျးသိမျးတာ တျောလှနျးလို့ ကားရဲ့ ရနံ့ကတောငျ အသဈစကျစကျအတိုငျး ရနသေေးတယျလို့ ဆိုတယျ။
Standard ဖွဈတဲ့ မွငျးကောငျ ၉၈၇ အား တံခါးနှဈပေါကျ Coupe ကားပါ။ ပိုလနျးတဲ့ Hermes Edition နဲ့။
၆.၃ လီတာ V12 အငျဂငျြနဲ့ Hybrid Assistance ပါဝငျတယျ။ အခွခေံမွငျးကောငျရေ ၉၅၀ အားရှိပွီး ငါးနှဈကွာပွီဖွဈပမေယျ့ ကားဝါသနာအိုးတှကေို သှားရယေိုစတေုနျးပဲ။
၁၀. Ferrari F50 (အလယျမှာ)
နှဈပေါငျး ၂၀ ကြျောကွာခဲ့ပွီ ဖွဈပမေယျ့ ပုံစံက ခတျေမှီနတေုနျးပဲ။
ဂပြနျကားခဈြသူတှေ အတှကျတော့ ရှားပါးတဲ့ စုစညျးမှုပါပဲ။ ယာမာဟာကုမ်ပဏီနဲ့ ပူးပေါငျး တညျဆောကျခဲ့တဲ့ ကားဖွဈပါတယျ။ ယခုအခြိနျမှာ အရမျးရှားပွီး ဈေးအရမျးမွငျ့တဲ့ Collection ဖွဈနပေါပွီ။
အမရေိကနျကုမ်ပဏီ Saleen ရဲ့ Legacy ကို စတငျပေးခဲ့သူတဈဦး။ Bruce Almighty ရုပျရှငျမှာ ငှရေောငျမျောဒယျတဈစငျး ပါခဲ့ဖူးပါတယျ။
သူ့ရဲ့ Top Speed ဖွဈတဲ့ တဈနာရီမိုငျ ၂၇၀ နှုနျးဖွငျ့ အပွညျ့မောငျးနှငျတာကို ဘယျလို ကံဇာတာနဲ့မှ တှမွေ့ငျခှငျ့ရမှာ မဟုတျပါဘူး။
လကျရှိမှာ Top Speed 277 mph နဲ့ ကမ်ဘာ့အမွနျဆုံး စကျရုံထုတျ လူစီးကား ဖွဈပါတယျ။
ကှနျမနျဒို အစိမျးရောငျ ထိုငျခုံတှနေဲ့ ကားဟာ အစီးရေ ၂၀ ပဲ ထုတျလုပျတဲ့ထဲက တဈစီးပါ။
@the_collection1 ရဲ့ ဂိုထောငျထဲမှာတော့ Porsche, McLaren, Mercedes တို့က ထုတျခဲ့တဲ့ နာမညျကြျောကားတှေ အမြားစုကိုလညျး မွငျတှရေ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ကား Collection ကို အားကခြငျြရငျတော့ အငျစတာအကောငျ့မှာ သှားရှာကွညျ့လို့ရပါတယျ။